Wikipedia amin'ny teny malagasy - Wikipedia
Wikipedia amin'ny teny malagasy
Pejy fandraisan'i Wikipedia amin'ny teny malagasy
Ny Wikipedia amin'ny teny malagasy dia tetikasa iray an'i Wikimedia Foundation. Ny kaondim-piteny ampiasainy dia « mg », ampiasain'ny fiteny malagasy amin'ny ankapobeny.
Ny wikipedia amin'ny teny malagasy dia nosokafana tamin'ny taona efatra sy roa arivo ary izy ankehitriny ny wikipedia fahadimy lehibe indrindra ao aorian'ny fiteny afrikaans, ny fiteny soahily ary ny fiteny yoroba. Ny isan'ny mpikambana nisoratra anarana ao amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 2 500 fa iray na roa amin'ireo monja no tena mpikambana mavitrika.
Wikipedia faha efatra lehibe indrindra amin'ny fiteny any Afrika ny wikipedia malagasy. Ary izy irery ankehitriny no tetikasa Wikipedia amina fiteny barito.
Ny toerana misy ny mpiteny malagasy dia any Madagasikara amin'ny ankapobeny (roapolo tapitrisa). Na dia izany aza raha oharina amin'ny fiteny hafa izay manana teny teratany ho teny ofisialy, vitsy ny mpitsidika avy any Madagasikara mitsidika ny Wikipedia amin'ny teny malagasy, ary vitsy ny mpitsidiky ny Wikipedia amin'ny teny malagasy avy any Madagasikara.
1 Fiteny ampiasaina amin'ny votoatiny
Fiteny ampiasaina amin'ny votoatiny [hanova]
Ny fiteny tena ampiasaina amin'ny fanoratana ny lahatsoratra amin'ny teny malagasy dia ny teny malagasy ofisialy. Na dia izany aza tsy ny teny malagasy ofisialy ihany no azo ampiasaina eto amin'ny Wikipedia amin'ny teny malagasy fa ekena avokoa ireo fitenim-paritra. Araka izany ny kaodim-piteny ampiasain'ny teny malagasy dia "mg" fa tsy "plt", izay natao ho an'ny teny malagasy tenenina eo amin'ny faritra afovoan'i Madagasikara.
Tamin'ny volana Aogostira 2012, lasa Wikipedia amin'ny fiteny afrikanina lehibe indrindra ny Wikipedia amin'ny teny malagasy izay niisa lahatsoratra 38 000 ary mpikambana 4 900. Ny Wikipedia amin'ny teny afrikanina manaraka azy dia ny Wikipedia amin'ny teny soahily ary ny Wikipedia amin'ny teny yoroba izay manana lahatsoratra niisa telo alina ary 24 000. Telo volana sy tapany taty aoriana tamin'ny volana Desambra 2012, dia nihoatra ny efatra alina ny isan'ny lahatsoratra, izay nahatonga ny Wikipedia malagasy ho Wikipedia voalohany indrindra manana lahatsoratra efa alina.
Aprily 2004 : Daty nanokafany ny Wikipedia amin'ny teny malagasy.
Oktobra 2005 : Famaranana ny lahatsoratra fahazato.
Aprily 2009 : Arivo ny isan'ny lahatsoratra.
Janoary 2010 : Roa arivo ny isan'ny lahatsoratra
6 Mey 2011 : Iray alina ny isan'ny lahatsoratra
Androany Alarobia faha 22 ny volana Mey 2013, ny wikipedia malagasy dia manana lahatsoratra miisa 41 410.
Rohy ivelany [hanova]
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_amin%27ny_teny_malagasy&oldid=635173"	Sokajy : Wikipedia	Menu de navigation
Voaova farany tamin'ny 29 Martsa 2013 amin'ny 21:19 ity pejy ity